Nezvedu - Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.
Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.. yakagadzwa muna1996.Iye inyanzvi yekambani mune yepamusoro-soro yemvura kristaro inoratidzira (LCD) yemvura yekristaro yekuratidzira module (LCM) Kubudirira uye kugadzirwa kwemhando yepamusoro uye nyowani tekinoroji.
Yakapfuura SGS, TUV, BVQI, DNV uye nezvimwe zvitupa zvesangano; maererano neLCD yepamberi, LCM otomatiki yekugadzira mutsara uye tekinoroji yekugadzira, inowana TN-LCD, STN-LCD, SMT-LCM, COB-LCM, COG-LCM, TFT-LCM, OLED-LCM etc , iyo doti diki inodzika 0,001mm, iyo yakaderera mutsara mutsara iri 0.003mm.
Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd.. yakagadzwa muna1996.Iye inyanzvi yekambani mune yepamusoro-soro yemvura kristaro inoratidzira (LCD) yemvura yekristaro yekuratidzira module (LCM) Kubudirira uye kugadzirwa kwemhando yepamusoro uye nyowani tekinoroji. Yakapfuura SGS, TUV, BVQI, DNV uye nezvimwe zvitupa zvesangano; maererano neLCD yepamberi, LCM otomatiki yekugadzira mutsara uye tekinoroji yekugadzira, inowana TN-LCD, STN-LCD, SMT-LCM, COB-LCM, COG-LCM, TFT-LCM, OLED-LCM etc , iyo doti diki inodzika 0,001mm, iyo yakaderera mutsara mutsara iri 0.003mm.
Hengtai (Hong Kong) share Co., Ltd. parizvino ine zvinopfuura mazana mana emvura yemvura yakatarisana nekristaro (LCM), uye huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zveLCD zvigadzirwa zvakagadzirwa kubva kumutengi. Panguva imwecheteyo, Tiri vakanaka pakugadzira TFT-LCD, STN-LCD uye LCM inoratidzira neakasiyana maratidziro uye akasiyana ehunyanzvi zvinodiwa kune vatengi .azvino zvigadzirwa zveLCD zvashandiswa mukushandisa, mota dzemagetsi zvigadzirwa, thermometer, reropa metres, emagetsi zviyero, smart metres emagetsi, emamita emvura, tafura yemagetsi, odhiyo, maair conditioner, maremote control, induction cookers, massager, treadmills, michina yemafuta, michina yekufunda, madimikira emagetsi, MP3, wachi nemawachi, CNC mafuta ekupa mafuta, kutaurirana kwemari, zvekurapa zviridzwa, midziyo yemumba, zvigadzirwa zvemadhijitari, maindasitiri kushandisa otomatiki kudzora, dzakasiyana-siyana dzemuchina-dzemuchina, zvigadzirwa zvemaoko, zvigadzirwa zvemashoko uye mimwe minda zvinoshandiswa zvakanyanya nevatengi, zvinogara zvichisangana nezvinodiwa zvemaindasitiri akasiyana siyana eLCD zvigadzirwa. Izvo zvigadzirwa zvinovimbwa uye zvinorumbidzwa neshamwari dzenyika dzese nekuda kwavo kwemhando yepamusoro, kushomeka kwesimba kwesimba, kukurumidza kuburitsa, mutengo unonzwisisika, rutsigiro rwakakodzera nguva uye runofungisisa, uye vatangisa hukama hwakareba hwekudyidzana.
Hong Kong Hengtai Kambani inoteedzera manejimendi mutemo we "Hunhu kubatsirwa hwakakwirira kupfuura hwese, sevhisi inozadzisa ramangwana" uye inoteedzera yekutanga-kirasi mhando uye tekinoroji kusimudzira. Kuburikidza nekuenderera mberi kwekutungamira kwebhizinesi manejimendi, mukutsvaga kumisikidza kwenguva refu mushandirapamwe hukama husingaregedze kuedza, kutendeka kune yakakura kupa vatengi zvigadzirwa nezvibodzwa zvevatungamiriri vezera. Isu tichagara tichikudziridza uye kugadzira zvakawanda uye zvirinani zvigadzirwa, kune vatengi vanoteerera kune mhando uye mhando chiratidzo.
Nekukurumidza kukurumidza kweiyo LCD inoratidzira indasitiri, isu tinonyatsoteedzera kuvandudza kwepasirese kuratidzira tekinoroji yepasirese, kuve kwechokwadi hunyanzvi, ramba uchivandudza! Vatengi vanogamuchirwa kubvunza uye kuodha zvigadzirwa zvedu!
Enterprise zvinangwa: Ipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye dzidzisa vashandi vepamusoro. Tungamira kuvandudzwa kwemvura inoyerera yekristaro uye ita yekutanga-kirasi LCD inogadzira!
Enterprise mweya: Kuisa vanhu pekutanga, kutsvaga chokwadi kubva kuzvokwadi, kutsigira hunyanzvi, uye kugara uchipfuura.
Bhizinesi uzivi: Yakakwira Hunhu, hunyanzvi, kuvimbika, rigorhi. Yakakwira Hunhu: Ipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye technical services. Innovation: shandisa nyowani maitiro tekinoroji uye unoramba uchigadzira nyowani.
zvigadzirwa uye matekinoroji: Kuvimbika: kwemabhizinesi ndiyo hwaro hwekusimudzira bhizinesi. Pasina kutendeka zvakaenzana kwete zvese. Rigorous: Nyatsozvida iwe uye bata hukama hwevatengi wakangwarira kupa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye technical services.